Mootummaan Yamani fi gareen Huusii Hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Mootummaan Yamani fi gareen Huusii Hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan
Mootummaan Yamani fi gareen Huusii Hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan
Qondaaltonni Mootummaa Yaman akka jedhanitti, walii galteen hidhamtoota wal jijjiiruu kun marii nageenyaa torbee dhuftu Siwiidin keessatti geggeessuuf UN qopheessaa jiruun duratti, wal amantaa cimsuuf kan yaadame tahuu ibsan. Ministeerri haajaa alaa Khalid Al-Yamani akka jedhetti, walii galtee kanaan gareen Huusii deeggartoota mootummaa 2000 kan lakkisu yoo tahu, akkasumas mootummaan ammoo loltootaa fi deeggartoota Huusii 1500 finciltootaaf dabarsee kan kennu tahuu beeksise.
Garee Huusii irraa Itti gaafatamaan dhimma hidhamtootaa Abdulqaadir Al-Murtazaa gama isaatiin akka jedhetti, Gareen Huusii walii galtee kana ji’a dabre keessa kan mallatteesse tahuu ibsuun, mootummaan Yamanii fi gamtaan waraana Arabaatis torbee kana kan malllatteessan tahuu Yamanitti bakka bu’aan UN Martin Griffith kan isaanii mirkaneesse tahuu ibse.
Martin Griffith torbee lama dura mana mare dhimmoota nageenyaatiif gabaasa dhiheesseen, gareewwan Yaman keessatti waraana irra jiran marii nageenyaa jalqabsisuudhaaf carraaqqiin kan jalqabame tahuu ibsuun isaa ni yaadatama. Marii torbee dhufutu magaalaa Stockholm keessatti geggeefamu kana irratti, lola Yaman keessatti lubbuu namoota kumaatamaa harcaase kanaaaf furmaata dippiloomaasii barbaaduudhaaf, walii galtee dhukaasaa dhaabuu mallatteessuuf, akkasumas haalli raawwii hidhamtoota wal jijjiiruu maal tahuu qaba kan jedhu irratti bal’inaan kan mari’atan tahuu gabaasni arganne ni addeessa.
Baha Jiddu-Galaa Yaman
May 26, 2020 sa;aa 10:58 pm Update tahe